လူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာနဲ့ WINDOWS နှင့်အတူသင့် HARD DRIVE ကိုတစ် BACKUP လုပ်ထားမိတ္တူအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
လူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာနဲ့ Windows နှင့်အတူသင့် hard drive ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အလွန်မကြာခဏယာဉ်မောင်းကို update သို့မဟုတ်မည်သည့်လျှောက်လွှာကို install မတိုင်မီအများအပြားညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူကွန်ပြူတာ Windows အတွက် backup တစ်ခုမိတ္တူစေရန်အကြံပြုသည်။ ငါပေးရမကြာခဏ, ထိုတူညီသောအကြံပြုချက်များဝန်ခံရမယ် ...
ယေဘုယျအားဖြင့်, Window built-in ဖြစ်ပါတယ်နာလန်ထူအင်္ဂါရပ် (သင်သင်တန်း၏, ပိတ်ထားကြပြီမဟုတ်လျှင်), ဒါပေမယ့် super-ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အဆင်ပြေပါကဖုန်းခေါ် - ငါအလိုမရှိ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီသူက data တွေကိုအရှုံးပြန်လည်သက်သာကြောင်း, backup လုပ်အားလုံးကိစ္စများတွင်မကကူညီဖို့အပေါင်းဖို့ add လိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြုရပါမည်။
ဤဆောင်းပါး၌ငါဒါပေါ်မှာရှိသမျှစာရွက်စာတမ်းများ, ယာဉ်မောင်း, ဖိုင်တွေ, Windows နှင့်အတူတစ်ခုလုံးကို hard disk ကို partition ကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော backup လုပ်ထားစေရန်ကူညီနိုငျသောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းအကြောင်းကိုသင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒါရဲ့ start ပါစေ ...
1. ကို USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် CD / DVD ကို disc ကို
အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်သနည်း အချို့သောအမှားရှိခဲ့လျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, နဲ့ Windows ကိုပိုမို load မည်မဟုတ် - ရုံအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ (ထိုလမ်းဖြင့်, ဒီက "အန္တရာယ်" ရုတ်တရက်ပါဝါပြတ်တောက်ပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်) ...
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန် - ကျနော်တို့အစီအစဉ်၏မိတ္တူနှင့်အတူ pre-ထူထောင်အရေးပေါ် flash drive ကို (သို့မဟုတ် drive ကို, flash drive ကိုရိုးရှင်းစွာပိုမိုအဆင်ပြေ) ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စကားမစပ်အဆိုပါ flash drive ကိုမဆိုပင်ဆိုအဟောင်း 1-2 GB ကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက် 2. ဆော့ဖျဝဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆော့ဖ်ဝဲ၏ဤအမျိုးအစားတွေအများကြီး။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည် Acronis True Image တို့အပေါ်၌နေသောရန်အဆိုပြု ...
Acronis True Image တို့
အဓိကအားသာချက် (backup လုပ်ထားအစီအစဉ်):
- လျင်မြန်စွာ backup တစ်ခု hard drive ကို (ဥပမာ, ငါ့ကို PC system ကို Partition ပေါ်မှာရှိသမျှသောအစီအစဉ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ Windows 8 ကိုအတူ hard drive ကိုအသက် 30 GB အထိဖြစ်ပါသည် - အစီအစဉ်ကိုဖွင့်နာရီဝက်၌ဤ "ကောင်းသော" ၏ပြည့်စုံမိတ္တူဖန်ဆင်းတော်မူပြီ) ဖန်တီး;
- စစ်ဆင်ရေး၏ရိုးရှင်းများနှင့်လွယ်ကူခြင်း (ရုရှားဘာသာစကား + အလိုလိုသိ interface ကို, ကိုင်တွယ်ရန်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူအပြည့်အဝထောက်ခံမှု);
- အလွယ်တကူမယ့် bootable USB drive ကသို့မဟုတ် disc ကိုဖန်တီး;
- backup လုပ်ထား hard disk ကို default အနေဖြင့် compressed ဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ, ငါ့မိတ္တူ partition ကို HDD ကို 30 GB အထိ - နီးပါးကို2ကြိမ်ဖြစ်သည့် 17 GB ကိုမှတက် compressed လျက်ရှိသည်) ။
တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက် - အစီအစဉ်ကိုပေးဆောင်, စျေးကြီး (သို့သော်စမ်းသပ်ကာလလည်းမရှိ) မရပေ၏။
2) backup တစ်ခု hard disk ကို partition ကို Create
သငျသညျကိုပြတင်းပေါက်အကြောင်းရှေ့တော်၌ထိုအစီအစဉ်ကို Acronis True Image တို့ကို install နှင့်အပြေးပြီးနောက်, သငျသညျ (အလွန်သင်သည်ငါ၏ screenshots များ 2014 အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးပါလိမ့်မည်သည့်အစီအစဉ်၏ဗားရှင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ) ကိုကြည့်ပါသင့်တယ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်ပထမဦးဆုံး screen ပေါ်မှာ, သင် backup လုပ်ထားရွေးနိုင်သည်။ (အောက်တွင်။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ) ... Run လိုက်ပါ။
ဘေးက settings ကိုပြတင်းပေါက်လာကြ၏။ ဒါဟာအောက်ပါသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်:
- ငါတို့သည် backup လုပ်ထားမိတ္တူစေမည်ဖြစ်သောပေါ်ဘီး (ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေးခယျြ, ငါက Windows reserved သောစနစ်တစ်ခု disk ကို + disk ကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုအောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံကိုကြည့်ပါ။ ) ။
- backup လုပ်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်ဟုအခြား hard drive ပေါ်တွင်တည်နေရာကိုသတ်မှတ်။ ဒါဟာဥပမာသီးခြား hard drive ကို, ပြင်ပ (ယခုသူတို့အလွန်လူကြိုက်များပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဖြစ်ကြသည်) အပေါ်တစ်ဦး backup လုပ်ထားစောင့်ရှောက်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
ထိုအခါရိုးရှင်းစွာ "မော်ကွန်း" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
မိတ္တူအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပါ။ ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန် hard disk ကို၏အရွယ်အစား, သင်လုပ်နေတာထားတဲ့တစ်ဦးမိတ္တူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ၏အ 30 ကို GB ကို drive ကိုလုံးဝမိနစ် 30 ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် (ပင်ကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းသည်ထက် 26-27 မိ။ ) ။
ဒါကြောင့်ထွက်ဂိမ်း, ရုပ်ရှင်နှင့်: အဆိုပါ backup လုပ်ထားဖြစ်စဉ်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့မအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာစကားမစပ်, တစ်စခရင်ပုံက "My Computer ကို။ "
အောက်ပါ image ကို backup လုပ်ထား 17 GB အထိ။
ပုံမှန် backup ပြုလုပ်ခြင်း (အလုပ်တွေအများကြီးပြီးနောက်သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်အရေးကြီးသောနောက်ဆုံးသတင်းများ, ယာဉ်မောင်းနှင့် install မတိုင်မီ။ ) ပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်သေချာအချက်အလက်များ၏ဘေးကင်းဖြစ်, နှင့်အထွေထွေ, အကို PC performance ကိုအတွက်နိုင်သလား။
3) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန် backup တစ်ခု flash drive ကို Create
backup လုပ်ထား disk ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, သူက (အမှု၌ကို Windows boot မနှင့်အထွေထွေအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူအကောင်းဆုံးကို USB drive ကနေ boot တက်နေဖြင့်ပြုသောအမှုသည်) အခြားအရေးပေါ် flash drive ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် disk ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဒါ, backup လုပ်ထား၏အပိုင်းအကူးအပြောင်းကိုစတင်နှင့် restore နှင့်ကို click ရန် "Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင်ဖန်တီးပါ။ "
ထိုအခါသင်ရုံ (အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအတွက်) အားလုံး checkboxes ကို ထား. , ဖန်တီးဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါမှသာ informatsiya.Vybiraem က USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် disk ကိုမှတျတမျးတငျထားပါလိမ့်မည်သည့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော, ရှေးခယျြဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
သတိပေးခြင်း! အဆိုပါ flash drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များသည်ဤစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကို flash drive ကနေအရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုကော်ပီကူးဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
တကယ်တော့အားလုံး။ အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်.5မိနစ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) bootable မီဒီယာကိုအောင်မြင်စွာဖန်တီးလိုက်ပါပြီသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုအပြီး, မှန်ကန်စွာသှားလြှငျ ...
4) Backup ကိုကနေ Restore
သင်တစ်ဦး backup လုပ်ထားထဲက data အားလုံးကို restore ချင်တဲ့အခါသင်တစ်ဦးကို USB drive ကနေ boot ကို USB သို့က USB flash drive ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါဖို့ BIOS ကို configure ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထပ်ထပ်ရှောင်ရှားရန်, ငါကို flash drive ကနေ boot ဖို့ BIOS ကိုဆက်တင်ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှ link တစ်ခုအားငါပေးမည်:
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ boot တက်အောင်မြင်လျှင်, သင်အောက်ပါပုံရိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ program ကို run ခြင်းနှင့်တင်ဘို့စောင့်ပါ။
ထို့နောက် "နာလန်ထူ" ၌ "ဟုအဆိုပါ backup လုပ်ထားရှာဖွေ" ကိုနှိပ်ပါ - ကျွန်တော်တစ်ဦး backup လုပ်ထားမိတ္တူကိုကယ်တင်ရှိရာ Drive နှင့်ဖိုင်တွဲကိုရှာပါ။
ထိုအခါနောက်ဆုံးခြေလှမ်း - (အောက်ပါပုံရိပ်ကြည့်ရှုပါ။ ) ကိုတပ်မက်လိုချင်သောအ backup လုပ်ထားအပေါ်ရုံကို right-click နှိပ်ပြီးဖြစ်လာခဲ့သည် (သင်တဦးတည်းထက်ပိုရှိပါက) နှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်ပါ။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ Paragon Partition ခွဲမန်နေဂျာ Paragon Hard Disk ကိုမန်နေဂျာ EaseUS Partition ခွဲမာစတာ: အ Acronis အစီအစဉ်ကိုမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ရောက်ရှိမထားလျှင်, ငါအောက်ပါအာရုံစိုက်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © မေးခွန်းနှင့်အဖြေ 2019